Madaxweyne Donald Trump Hanjabadii Ugu Adkayd U Diray Sacuudiga Baahintii xogta Jamaal Khaashuqji ee Erdogan Kadib . – somalilandtoday.com
Madaxweyne Donald Trump Hanjabadii Ugu Adkayd U Diray Sacuudiga Baahintii xogta Jamaal Khaashuqji ee Erdogan Kadib .
(SLT-Washington) Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay jawaabta Sacuudi Carabiya ay ka bixisay dilka wariye Jamal Khaashuqji ay tahay “qarinti abid ugu xumeyd oo lagu qariyo fal dil oo dhacay.”
Sacuudigu halkuu ka joogaa arrintan?
Boqor salmaan oo talaadada golahiisa wasiirrada la shiray ayaa wuxuu sheegay iney Sacuudi Carabiya la xisaabtami doonto shaqsiyaadka dilka Khaashuqji ku lug lahaa.
Warbaahinta afka dawladda ku hadasho ayaa waxay sheegeen boqorka iyo amiirka dhaxal sugaha ah iney magaalada Riyadh ay kula kulmeen qaar ka mid ah qoyska Khaashuqji oo uu ka mid yahay Salax Binu Jamaal oo ah wiil uu dhalay Khaashugji.
Wasiirka arimaha dibadda Sacuudi Carabiya, Caadil Al-Jubayr, ayaa u sheegay telefishanka Fox News in “dilku” ahaa “khalad weyn” waxaanu beeniyey in dhaxal sugaha taajka boqortooyada ee awoodda badani amray.
Khaashuqji waxa markii ugu dambaysay isagoo nool la arkay markii uu galayey qunsuliyadda Sucuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Saraakiisha Turkiga ayaase rumaysan in Khaashuqji oo ahaa nin ku cadcad dhaliisha xukuumadda Sucuudiga ay koox ka tirsan sirdoonka Sucuudigu ku dhex dishay dhismaha qunsuliyadda waxaanay sheegeen in ay hayaan caddaymo arintaa muujinaya.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, oo soo xiganeysa Sirdoonka Turkiga iyo Carabaha ayaa waxay qortayxilliga Khaashuqji intaan la dilin ka oo wareysiga laga qadayey inuu Sacuud Al-qaxtaani uu ku amray “iney u keenaan eeyga madaxiisa” oo ula jeedo madaxa Jamal Khaashugji.
Warku wuxu intaa ku darayaa Madaxweyne Erdogan inuu nuqul ka mid ah codadka Skype ay isku dhaafsadeen boqortooyada iyo xubnihi dilka geystay uu hayo balse uu diiday inuu Mareykanka uu gacanta ka geliyo.